Hogaamiyayaasha Safarada Caalamiga ah waxay ku Kalsoon Yihiin Soo kabashada Safarka Buuxa 2023
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Hogaamiyayaasha Safarada Caalamiga ah waxay ku Kalsoon Yihiin Soo kabashada Safarka Buuxa 2023
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Sahan cusub oo khubarada warshadaha safarka ee caalamiga ah, oo ay sameeyeen Collinson iyo CAPA - Xarunta Duulista (CAPA), waxay muujineysaa kororka rajada dib u soo celinta safarka ilaa heerarkii hore ee masiibada 2023, marka loo eego filashooyinka 5 bilood ka hor.
Saamaynta socdaalku ku leeyahay fayoobaanta, iyo sidoo kale cabsida laga qabo safarka been abuurka ah iyo dukumentiyada tijaabada, ayaa la filayaa inay sii ahaato welwelka muhiimka ah ee safarka.
Ganacsiga iyo safarka dheer ee safarka si uu u ahaado qaybaha safarka ee soo kabashada ugu gaabis ah 2022; wakhtiga firaaqada gaaban waxay arkaysaa bilawga soo noolaynta.
Rajo wanaagsan ayaa ka dhacday Aasiya Baasifigga, maadaama khubarada duulista iyo duulista sare ay aad uga taxaddar badan yihiin kuwa caalamiga ah.
Marka nidaamka deegaanka socdaalku uu sii wado la qabsiga Faafida Covid-19 ee socota, Daabacaadda labaad ee cusub ee la bilaabay "Warbixinta Soo-kabashada Safarka Asia Pacific" ee Collinson, waayo-aragnimada safarka ee dhamaadka-ilaa-dhamaadka, adeegyada garoonka diyaaradaha iyo shirkadda caafimaadka safarka, iyo CAPA - Xarunta Duulista (CAPA), waxay soo bandhigtay warshadihii ugu dambeeyay ee safarka. saadaasha soo kabashada - oo ay ku jiraan rajada socotada - sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeya.
Sahan ballaaran oo lagu sameeyay in ka badan 400 C-Suite iyo khubaro dhanka socdaalka ah oo heer maareyn ah oo hormuud ka ah noocyada safarka caalamiga ah ayaa muujinaya in halka 37% jawaab bixiyaasha ay hadda rajeynayaan "soo kabashada buuxda" ilaa 2019 heerar ka hor masiibada 2023 - marka la barbar dhigo 35% Sahankii Abriil 2021 - rajada laga qabo in xasaanadda lo'da lagu gaari doono US, UK iyo dhowr waddan oo kale oo horumaray ayaa hoos uga dhacday 33% ilaa 24%. Intaa waxaa dheer, welwelka ku saabsan karantiil iyo been-abuurka natiijooyinka baaritaanka Covid-19 ayaa weli ah welwelka jawaab-bixiyeyaasha.
Sahanka waxaa sameeyay Sebtembar 2021 Collinson oo ay iskaashanayaan CAPA - mid ka mid ah ilaha ugu kalsoon ee adduunka ee sirta suuqa ee duulista iyo warshadaha safarka - si loo sii wado daraasadda soo kabashada warshadaha oo loo saadaaliyo khibrada cusub ee socotada.
Xuduudaha oo dib loo furay
Polarization ee ku saabsan kontaroolada safarka, tijaabinta iyo siyaasadaha ayaa weli ah caalami ahaan, iyada oo shuruudaha suuqa, borotokoolka iyo cabbiradu ay sii socdaan isbeddelada dhowrkii bilood ee la soo dhaafay.
Taasi waxay tidhi, tirada sii kordheysa ee khubarada ayaa hadda filanaya soohdinta dib u furista qabanqaabada dawladuhu si ay u fududeeyaan ama si weyn loogu fududeeyo 2022 (43%), halka saddex meelood meel jawaabeyaasha caalamiga ah (32%) ay wali filayaan qabanqaabada furitaanka xuduudaha ee dawladuhu in ay ku horumaraan heerar kala duwan sanadka 2022. Tani waa hoos u dhac weyn marka loo eego sahanka Abriil 2021 56%, halkaas oo hubanti la'aantu ay ku badan tahay.
Tijaabinta si ay u sii ahaato, iyada oo karantiilka meesha laga saaray
Muujinta kalsoonida lagu qabo tijaabinta borotokoolka awood u siinaya soo laabasho badbaado leh oo safarka ah, in ka badan kala badh (54% - koror 3% ah tan iyo Abriil) waxay filayaan in tijaabada adag ee 'Covid-19' ay furaha u ahaato dib u furista xuduudaha ilaa dhamaadka 2022, oo ay weheliso 26 kale % waxay filayaan tan ilaa dhamaadka 2023. Maskaxdan waxaa lagu arki karaa dib u furista xudduudaha dhowaan laga furay suuqyada sida Singapore, Australia iyo Mareykanka - kuwaas oo dhamaantood tixraacaya tijaabooyinka 'Covid-19' oo ah qaybaha ugu muhiimsan ee karantiilnimada la dhimay ama xitaa karantiil - safar bilaash ah.
Taasi waxay tidhi, 74% khubarada ayaa ka walaacsan warbixinnada been abuurka ah ee natiijooyinka baaritaanka Covid-19 iyo baasaboorrada tallaalka. Heerarka kuwa "aad u walaacsan" waxay ka ahaayeen 38% bishii Abriil 2021 ilaa 41% Sebtembar 2021 iyo "mid khafiif ah" laga bilaabo 28% Abriil 2021 ilaa 34% Sebtembar 2021. Si wax looga qabto walaacyadan oo kale, Collinson waxa uu iskaashi la samaynayaa wax ka badan 30 shirkadood oo diyaaradeed, garoomo diyaaradeed iyo bixiyeyaasha tignoolajiyada adduunka oo dhan si ay gacan uga geystaan ​​hirgelinta hababka xaqiijinta ee la xoojiyay ee isbaarooyinka muhiimka ah ee safarka, iyo sidoo kale in la aamino, la aqoonsan yahay ee 'Covid-19' ay si fudud u heli karaan dadka safarka ah.
Caalamkoo dhan, xishoodka saddex meelood oo meel (72%) ayaa la wadaagay aragtida ah in dukumeentiyada tallaalka socdaalku ay "muhiimad muhiim ah" leeyihiin, iyadoo dowladaha intooda badan aysan halis gelinin dib u furista xuduudaha la'aantood. Tani waa koror 5% ah marka la barbardhigo daraasaddii Abriil. Taa beddelkeeda, in ka yar shan meelood meel (18%) waxay u tixgeliyeen inay "muhiim yihiin," maadaama dawladaha qaar ay u oggolaan doonaan gelitaanka iyada oo aan loo eegin dukumentiyada caafimaadka dhijitaalka ah.
Mar qofka socotada ah uu waddan soo galo, waxay markaas la kulmaan karantiil suurtagal ah. Ku dhawaad ​​shan meelood laba meel khubarada (38%) waxay hadda filayaan in tillaabooyinka karantiilku ay sii jiri doonaan mustaqbalka la filayo si ay taxaddar badbaado oo dheeri ah u ahaadaan marka lagu daro tallaallada iyo tijaabinta, laga bilaabo 23% Abriil 2021.
Taa beddelkeeda, tiro badan oo hoggaamiyeyaasha warshadaha ah ayaa weli rajo ka qaba ficilka dhow ee aaggan. 42% ayaa aaminsan in tillaabooyinka karantiilka la joojin doono dhammaadka 2021, iyadoo la raacayo tallaallada iyo tillaabooyinka tijaabinta oo si ballaaran loo heli karo. Si kastaba ha noqotee, sida muuqata dareenka ayaa hoos u dhacay marka la barbar dhigo 58% kuwaas oo ahaa isla caqiidadii bishii Abriil 2021.
Xaalada qofka socotada ah
Qayb badan oo khubarada ah ayaa aaminsan in socdaalku "aad u nabdoon yahay" haddii qof kastaa u hoggaansamo xalalka ka-hortagga ah (tusaale, xidhashada waji-xidhka, fogeynta bulshada). Laakiin taasi waxay tidhi, tiradu waxay hoos ugu dhacday 17% la arki karo (42% la diiwaan galiyay Sebtember; 59% bishii Abriil), taasoo soo jeedinaysa kalsoonida kalsoonida in kasta oo tallaalka baahsani uu jiro, oo la siiyay noocyo kala duwan oo ah waxa shakhsiyaadka u qaadan karaan inay yihiin xalal badbaado leh.
Sidoo kale, dadka u dhuun daloola safarka oo si fudud "aan badbaado lahayn" ayaa labanlaabmay: laga bilaabo 4% bishii Abriil 2021 ilaa 10% Sebtembar 2021. Tani waxay tilmaan u tahay fursadda lagu dejinayo, waxbaridda iyo la xiriirida rakaabka sida badbaadadu weli tahay mudnaanta ugu weyn, gaar ahaan sida safarro badan ayaa cirka gala.
La yaab ma leh markaa, su'aalaha ayaa weli ku saabsan in dadka safarka ah ay awoodi doonaan inay dib u soo laabtaan oo ay nastaan ​​marka qorshahooda la ballansado. Suurtagal ma aha, marka loo eego sahanka, iyadoo saddex-meelood meel khubaro ah (79%) ay doorteen inay rumaystaan ​​​​in socdaalku uu dareemi doono "ka walwal badan" marka loo eego ka hor masiibada (ilaa 70% Abriil 2021).
Natiijooyinku waxay muujinayaan rabitaanka korodhka ah ee laga yaabo inay ka fogaadaan dadka isku buuqa badan" oo leh helitaan degdeg ah iyo waayo-aragnimada qolka fadhiga ee la door biday, nabadda maskaxda. Middaani waxay la jaan qaadaysaa kaxaynta caalamiga ah ee Mudnaanta Pass si kor loogu qaado waayo-aragnimada fadhiga ee socotada; iyada oo la soo bandhigayo Bedelay Spas ee nasashada kama dambaysta ah ee duulimaadka ka hor, iyo cunto iyo cabitaan aan xidhiidh la lahayn sida Diyaar 2 Amarka la dejiyay in la labanlaabo joogitaankeeda qolka fadhiga oo dhan si loogu helo khibrad cunto oo aan kala go 'lahayn.
Dib u bilow tartiib tartiib ah safarka ganacsiga
In kasta oo ganacsiga muddada-gaaban iyo safarka shirkadu ay si taxaddar leh ugu soo laabteen suuqyada qaarkood, waxaa jiray dhaqdhaqaaq yar intii u dhaxaysay sahamintii Abriil 2021 iyo Sebtembar 2021. Saadaasha safarka 2022, in ka badan seddex meelood meel (35%) jawaab bixiyaasha waxay filayaan 41-60% soo kabasho 2019 heerarkii faafitaanka kahor ee safarka ganacsiga gaaban, halka 23% ay aad u togan yihiin waxayna filayaan inay ku dhuftaan 61-80% ee heerarka 2019 sanadka soo socda. Kaliya 8% ayaa arkaya 80%+ ee heerarka 2019 sanadka soo socda - taasoo muujineysa tayada safarka ee ku haray "caadadiisa cusub."
Aasiya Baasifigga gaar ahaan, kaliya 24% waxay arkaan safarka gaaban ee shirkadda oo ka soo kabanaya in ka badan 61% ee heerarka 2019 sanadka soo socda - iyo 7% waxay arkaan baahida gaareysa afar-meelood afar meelood ee heerarka 2019.
Safarka ganacsi ee fog-fog ayaa ah midka ugu fog ee la gaari karo. Soo kabashada heerarka 2019 ayaa la filayaa inay qaadato waqti ka dheer mid kasta oo ka mid ah qaybaha kale, iyadoo jawaab-bixiyeyaashu ay ku kalsoon yihiin wakhtiga soo kabashada qaybta, sababtoo ah xannibaadaha safarka ee hadhay ee la soo rogay in ka badan intii markii hore la filayay. Marka loo eego 86% jawaab bixiyaasha, in ka yar saddex-meelood laba meel ganacsigii dheeraa ee suuqa safarada shirkadaha ayaa soo laaban doona sanadka soo socda. Halka Aasiya Baasifigga, in ka yar saddex meelood meel (30%) jawaab-bixiyeyaasha sahanka ay rumeysan yihiin inaan xitaa gaari doonin 20% heerarka 2019 sanadka soo socda.
Isagoo ka hadlaya cilmi-baarista, Priyanka Lakhani, Agaasimaha Ganacsiga ee Bariga Dhexe iyo Afrika iyo Agaasimaha Koonfurta Aasiya, Collinson wuxuu yiri: "Cilmi-baaristan socota waxay muhiim u tahay fahamka dareenka warshadaha iyo natiijada, qaadashada tillaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hubiyo badbaadada iyo muddada dheer. soo noqoshada safarka caalamiga ah. Lixda ilaa laba iyo tobanka bilood ee soo socda ugu yaraan, way caddahay in ka warshad ahaan, ay tahay in aan sii wadno ikhtiraacida iyo si wax ku ool ah ula xidhiidho horumarka socotada. Bilaha soo socda, diiraddayada udub-dhexaadka ah waxay ahaan doontaa horumarinta qalabyada iyo xalalka ka caawinaya dadka socotada ah inay si ammaan ah oo hufan ugu maraan jidkooda."
CAPA - Xarunta Maareynta Duulista Hawada, Derek Sadubin, ayaa ku daray: "Waxay ahayd mudnaan in aan mar kale la shaqeeyo Collinson, hoggaamiye caalami ah oo khibradaha socdaalka ah, si loo sii qiimeeyo sida dhagaystayaasheenna khubarada sare u arkaan muuqaalka safarka mustaqbalka ee qaabaynta. Natiijooyinka ayaa labaduba ah kuwo caqli gal ah, mararka qaarkoodna la yaab leh. Guud ahaan, waa in aan isu nimaadnaa warshad ahaan oo aan isticmaalno fikradahan si aan gacan uga geysanno aqoonsiga halka looga baahan yahay fiiro gaar ah si loo horumariyo soo noqoshada socdaalka caalamiga ah. "